WICShopper waxaa loo siidaayay kaqeybgalayaasha barnaamijka Massachusetts WIC bishii Abriil ee 2015. 6-dii usbuuc ee ugu horeysay barnaamijka wuu diyaar ahaa, in ka badan 15,000 oo qoys ayaa ku soo biiray kuna isticmaalay WICShopper in ka badan 80,000 oo safar ganacsi ah!
Barnaamijka WIC ee Massachusetts wuxuu kaloo isticmaalaa WICSmart, barnaamijka moobiilka ee ku saleysan qalabka nafaqada ee JPMA. Guji halkan si aad u akhrido wax badan oo ku saabsan iskaashiga u dhaxeeya JPMA iyo Massachusetts WIC.
Weydii Mass. WIC!
Barta "Weydiiso Mass WIC" waxaa ka buuxa talooyin iyo la-talin weyn oo loogu talagalay hooyooyinka ku jira barnaamijka Mass WIC. Laga soo bilaabo gargaarka culeyska fekerka illaa cuntada, Weydii Mass WIC wax ayey u leedahay qof walba.
Goobaha Xafiiska WIC
Raadi goobaha iyo macluumaadka xiriirka xafiisyada WIC ee degaankaaga.
Eeg ama soo qaado waraaqda WICShopper ee laga heli karo kaqeybgalayaasha xafiisyada Mass. WIC.
Waad ku mahadsan tahay samaynta app this!
Waxaan ahay hooyo afar caruur ah waxaanan sii waayi doonaa warqada aniga oo sheegaya wixii aan haystay. Barnaamijkani aad ayuu u fiicnaaday. Waad ku mahadsan tahay hoosta qalbigayga. Waxaan ka nimid Massachusetts oo gabadhayda 9 jirka ah waxay jeceshahay hubinta si loo arko waxa aan heli karno iyo waxa aan heli karin.
Ka-qaybgalaha MA WIC
Waxaan siinay WICShopper waxyaabo badan oo ka mid ah cuntooyinka xiisaha leh si qoyskaaga loogu kariyo mid xiiso leh oo macaan Ku raaxeyso intaad sahamineyso dhadhan cusub. Sii cunnooyinkan isku day - waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha hooyooyinka mashquulsan.